Iindaba -Ungayithenga njani i-watercolor yebrashi yokupeyinta ngobuchule kwabaqalayo?
Abaqalayo bathenga njani i-watercolor yepeyinti yepeyinti yebrashi? Oku kulandelayo zezinye iiparameter ezibalulekileyo endizishwankatheleyo xa uthenga ezi brashi.
Okokuqala, imilo yebrashi
Ngokubanzi, ibrashi engqukuva isetyenziswa kakhulu. Uninzi lwazo lungahlulahlulwa, ke andizukungena kwiinkcukacha apha. Ngapha koko, ndicinga ukuba usiba lwencam yebhola ikakhulu luxhomekeke kwisisu sepeni ukumisela ukugcinwa kwamanzi, kwaye ukumila kwe-nib kumisela incam yepeni.
Okulandelayo ibrashi yencam yesicaba, eyolulayo kwaye inomqolo webrashi. Ungathenga iibrashi ezibini ezithe tyaba, enye incinci kunye nenani elikhulu elahlulwe lambalwa, elinokusetyenziselwa ukwenza imizobo yokuma komhlaba. Ibrashi yomqolo isetyenziselwa ukusasaza amanzi (ukunyusa iphepha okanye ukupeyinta okumanzi). Ngokubanzi, unokukhetha i-30mm ebanzi okanye ifomathi ebanzi kancinci ye-16K.
Kukwakho nezinye iimilo, ezinje ngemilo yefeni, imilo yolwimi lwekati, imilo yeblade, njl., Ezingasetyenziswanga kakhulu, kwaye ngokubanzi akufuneki zithengwe.
Okwesibini, ubungakanani bebrashi (ubude nobubanzi)
Okwesithathu, ubukhulu yinto wonke umntu anokucinga ngayo. Njengokuba ndathenga uthotho lweepeni zeyiloni ukusuka kwi-0 ukuya kwi-14 yeSakura ekuqaleni, kukho zombini ezinkulu nezincinci. Emva kokuzoba okwethutyana, uyakufumanisa ukuba zimbini kuphela iipeni ozisebenzisa rhoqo.
Thatha ngokwam njengomzekelo. Ndihlala ndipenda kwifomathi ye-16K kwaye ngamanye amaxesha ngama-32K. Ke ukuba ibrashi yaseNtshona, ihlala ingu-6 kunye no-8, oko kuthetha ukuba ububanzi bepali yi-4-5 mm, kwaye ubude bepeni yi-18-22 mm. Kwibhrashi yesizwe, iXiuyi inobubanzi obuyi-4mm kunye ne-17mm ubude, kwaye inokuxhotyiswa ngepeni ye-5mm enje ngeYe Chan, iRuoyin njalo njalo.